မေး : နေလ ဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှု ဆိုတာ ဘာလဲ ?
ဖြေ : နေလ ဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှု မှ သင်ကံကောင်းစေဖို့ မေတ္တာ၊ စေတနာများစွာဖြင့် တစ်နေရာတည်းမှာ သုတ ရသ ဂမ္ဘီရ သတင်းအစုံအလင်ကို မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် ဖတ်ရှုနိုင်မည့် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
မေး : နေလ ဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှု ကို အသုံးပြုဖို့ ဘာတွေလိုအပ်လဲ ?
ဖြေ : ပထမဦးစွာ နေလ ဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှု ကို Google Play Store ကနေ Download ပြုလုပ်ပြီးပါက မိမိအသုံးပြုနေသာ မိုဘိုင်းဖုန်းထဲသို့ Install ပြုလုပ် ထည့်သွင်း ရပါမည်။ Install ထည့်သွင်းခြင်းအဆင့် ပြီးပါက MPT ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူပြီ နေ့စဉ် အကန့်အသတ်မရှိ ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ ထို့ပြင် နေလ ဝက်ပေါ်တယ် (naylaapp.com) မှတဆင့်လဲ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
မေး : နေလ မှ နေ့စဉ် ဘာတွေဖတ်ရှုနိုင်မှာလဲ ?
ဖြေ : နေလမှ ဂမ္ဘီရ သတင်းအစုံအလင်ကို မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် ဖတ်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး နေလ ဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှု မှ သုံးစွဲသူများအတွက် မင်္ဂလာမြန်မာနှစ် ၁၀၀ ပြက္ခဒိန်၊ ဗေဒင်ပေါင်းချုပ်၊ မဟာဘုတ်၊ ဖုန်းရွှေ၊ အမှတ်တရနေ့စွဲများ၊ ပွဲအခမ်းအနားအစီအစဉ်များ အစရှိသဖြင့် တစ်နေရာတည်းမှာ စုံစုံလင်လင် ဖတ်ရှုနိုင်သည့် အပြင် မင်္ဂလာအခါပေးအစီအစဉ်စသည့် အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုများနဲ့ ကံကောင်းစေတဲ့ လက်ဆောင်မွန် ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
မေး : နေလ ဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှု ကို မည်သည့်နေရာမှ ရယူနိုင်ပါလဲ၊ ဘယ်လိုအသုံးပြုနိုင်မလဲ ?
ဖြေ : နေလ ဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှု အား အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း ရယူနိုင်ပါသည်။ (1)	MPT လိုတရ Web Portal မှ အခမဲ့ ရယူနိုင်ပါတယ် (http://nl.lotayamm.com) (2)	Android ဖုန်းအသုံးပြုသူများအတွက် Google Play Store မှ ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါတယ် (3)	NayLa Web Portal (naylaapp.com) မှတဆင့်လဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ.် (4)	MPT ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် 8998 သို့ DD ဟုစာတိုပေးပို့ကာ အခမဲ့ Download link ရယူနိုင်ပါတယ်။ ဒေါင်းလုပ်ရယူပြီးပါက မိမိ အသုံးပြုနေသော ဖုန်းထဲသို့ Install ပြုလုပ်ကာ နေလ ဝန်ဆောင်မှုကို စတင် အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
မေး : နေလ ဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှု ကို အခမဲ့ Download လုပ်လို့မရဘူးလား ?
ဖြေ : နေလ ဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှု ကို Internet ခ ကုန်ကျမှုမရှိဘဲ အခမဲ့ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။ လိုတရ ဝက်ဆိုဒ် (http://nl.lotayamm.com/) မှ အခမဲ့ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် 8998 သို့ DD ဟု စာတို ပေးပို့ ပြီး အခမဲ့ ရယူနိုင်ပါသည်။
မေး : နေလ ဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှု ကို ဖုန်းထဲထည့်သွင်းပြီးတာနဲ့ စတင်အသုံးပြုလို့ရပြီလား ?
ဖြေ : နေလ ဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှု ကို ဖုန်းထဲထည့်သွင်းပြီးပါက MPT ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှု ကို ရယူပြီး နေ့စဉ် အကန့်အသတ်မရှိ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ် ။
မေး : တခြားဖုန်းနံပါတ်နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုယူလို့ မရဘူးလား?
ဖြေ : MPT ဖုန်းနံပါတ်တစ်မျိုးတည်းဖြင့်သာ ဝန်ဆောင်မှု ရယူနိုင်ပါသည်။
မေး : နေလ ဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှု မှာ ဝန်ဆောင်မှု ရယူလိုပါက ဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲ?
ဖြေ : နေလ ဗေဒင် ဝက်ပေါ်တယ် မှ တိုက်ရိုက် ဝန်ဆောင်မှုရယူနိုင်ပါသည်။ လူကြီးမင်း၏ မိုလ်ဘိုင်းဖုန်း တွင် MPT ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် Message မှ တစ်ဆင့် နေ့စဉ် ဝန်ဆောင်မှုအတွက် 8998 သို့ DD ဟု စာတို ပေးပို့ရမှာ ဖြစ်ပါသည်။
မေး : နေလ ဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှု မှ သတင်းတွေ နေ့စဉ် ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ ဝန်ဆောင်ခ ဘယ်လို ကောက်ခံ ပါသလဲ ?
ဖြေ : သတင်းဝန်ဆောင်ခ အတွက် ၁ ရက် ကို အခွန် ၅ % အပါအဝင် ၁၅၈ ကျပ် ပေးဆောင်ရပါမည်။
မေး : လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ ဝန်ဆောင်မှု ကနေ နောက်ထက် ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုကို ပြောင်းလို့ ရလား ?
ဖြေ : ဝန်ဆောင်မှု မန်ဘာပုံစံ တစ်မျိုးထဲသာရှိသည့်အတွက် ပြောင်းလဲ ရန် မရနိုင်ပါ။
မေး : ဆက်ပြီး အသုံးမပြုချင်တော့ရင် (ဘယ်လိုရပ်လို့ရလဲ / ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ) ?
ဖြေ : နေလ ဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှု မှ ဝန်ဆောင်မှုများ ရပ်တန့်လိုပါက 8998 သို့ “DD OFF” ဟု စာတို ပေးပို့ ပေးရပါမည်။
မေး : နေလ ဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှု မှာ ဝန်ဆောင်မှု ရပ်တန့်ပြီးမှ ဝန်ဆောင်မှု ပြန်လည်ရယူလိုလျှင် ဘယ်လို လုပ်ရမှာလဲ?
ဖြေ :ဝန်ဆောင်မှု ပြန်လည်ရယူလိုပါက 8998 သို့ DD ဟုစာတို ပေးပို့ကာ ပြန်လည် ရယူ နိုင်ပါသည်။
မေး : နေလ ဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှု နဲ့ ပါတ်သတ်လို့ သိချင်တာရှိရင် ဘယ်လိုစုံစမ်းရမလဲ။
ဖြေ :MPT ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် 8998 သို့ HELP ဟု စာတို ပေးပို့ကာ အကူအညီ ရယူ နိုင်ပါသည်။
မေး : နေလ ဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှု မှာ ဘယ်လို အကြောင်းအရာတွေ ပါဝင်မှာလဲ ?
ဖြေ : နေလ ဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှု မှ သင်ကံကောင်းစေဖို့ မေတ္တာ၊ စေတနာများစွာဖြင့် တစ်နေရာတည်းမှာ သုတ ရသ ဂမ္ဘီရ သတင်းအစုံအလင်ကို မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် ဖတ်ရှုနိုင်မည့် ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ နေလ ဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှု မှ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် မင်္ဂလာမြန်မာနှစ် ၁၀၀ ပြက္ခဒိန်၊ ဗေဒင်ပေါင်းချုပ်၊ မဟာဘုတ်၊ ဖုန်းရွှေ၊ အမှတ်တရနေ့စွဲများ၊ ပွဲအခမ်းအနားအစီအစဉ်များ အစရှိသဖြင့် တစ်နေရာတည်းမှာ စုံစုံလင်လင် ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုများနဲ့ ကံကောင်းစေတဲ့ လက်ဆောင်မွန် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
မေး : နေလ ဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှု မှာ ဘယ်ဆရာဟောတာလဲ။
ဖြေ :ဂမ္ဘီရနယ်ပယ်တွင် ထင်ရှာကျော်ကြားသော ဗေဒင်ဆရာများက ဟောထားတာဖြစ်ပါတယ်။
မေး : Internet connection လိုအပ်ပါသလား ?
ဖြေ :Internet Connection လိုအပ်ပါတယ်။
မေး : Internet အသုံးပြုခ ဘယ်လောက်ကုန်မှာလဲ ?
ဖြေ : သတင်းများအတွက် တစ်ရက်ကို 20 MB မှ 50 MB ဝန်းကျင် ကုန်ကျမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး : နေလ ဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှု မှာ သတင်းတွေကနေ့စဉ် အသစ်တင်ပေးမှာလား၊ တနေ့ ဘယ်နှစ်ပုဒ် လောက် တက်မှာလဲ ?
ဖြေ : သတင်းများကို နေ့စဉ် အချိန်နှင့်အမျှ အသစ်တင်ပေးပါသည်၊ တစ်နေ့တာအတွက် သတင်းအားလုံးစုစု ပေါင်း အနည်းဆုံး ၁၀ မှ ၂၀ ပုဒ်အထိ တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
မေး : နေလ ဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှု မှာပါဝင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေထဲ မှာ မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်သည့်၊ အလိုရှိသည့် အကြောင်းအရာ ကိုရွေးချယ်ပြီး ရယူနိုင်လား?
ဖြေ : နေလ ဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှု မှာပါဝင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေထဲ မှာ မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများကို ရွေးချယ်ရယူနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
မေး : နေလ ၏ဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ဖုန်းမှတဆင့် ဗေဒင် မေးလို့ ရနိုင်လား ?
ဖြေ : နေလ ၏ဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ဖုန်းမှတဆင့် ဗေဒင် မေးလို့ မရပါဘူး။
မေး : နေလ ဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှု ကို မိမိ မိုဘိုင်းဖုန်းမှ Uninstall ပြုလုပ်လိုက်ရင် ဖုန်းဘေလ်ထဲမှ နေ့စဉ်ဝန်ဆောင်ခ မန်ဘာကြေး ဖြတ်တောက်သေးလား ?
ဖြေ : အသုံးပြုသူ အနေဖြင့် အက်ပလီကေးရှင်းအား Uninstall မပြုလုပ်ခင် 8998 သို့ 'DD OFF' ဟု ပေးပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက်တွင် Uninstall ပြုလုပ်ပြီးပါက နေ့စဉ်ဝန်ဆောင်ခ ကျသင့်တော့မည် မဟုတ်ပါ။
မေး : နေလ ဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှု မှ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုဖို့ အခြားဆင်းမ်ကတ်တွေနဲ့ရော မရဘူးလား ?
ဖြေ : MPT ဖုန်းကဒ် ဖြင့်သာ ဝန်ဆောင်ခ ကို ပေးချေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခြားမည်သည့် ဆင်းမ်ကတ်နှင့်မှ မရပါ။
မေး : ကျွှန်တော်တို့က မြန်မာနိုင်ငံမှာ မဟုတ်ပါဘူး Oversea ကနေ ဘယ်လို အသုံးပြုလို့ ရနိုင်မလဲ (Subscribe) လုပ် လို့ရပါလဲ ?
ဖြေ : မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှ မဟုတ်သော အခြားနိုင်ငံမှသူများလဲ (Subscribe) ပြုလုပ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှု ရယူနိုင်ရန်အ တွက် ကြိုးစားနေပါတယ်။ ယခုလောလောဆယ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသာ (Subscribe) ပြုလုပ်နိုင်မှာပါ။
မေး : ဘယ်ဖုန်းမဆို အသုံးပြုလို့ ရလား ?
ဖြေ : Android Version 4.0 နှင့် အထက်မည်သည့် Android ဖုန်းမဆို အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။ Google Play Store မှ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။
မေး : iPhone မှာ အသုံးပြုလို့ရလား ?
ဖြေ : iPhone အတွက် အသုံးပြုချင်ရင် နေလ ဝက်ပေါ်တယ် (naylaapp.com) ကနေ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
မေး : သတင်းတွေက English ဘာသာနဲ့လား မြန်မာဘာသာနဲ့လား ?
ဖြေ : သတင်းအားလုံးကို မြန်မာဘာသာစကားဖြင့်ဖော်ပြပေးထားပါတယ် ။
မေး : UniCode Font နဲ့မှရတာလား နှင့် ZawGyi font နဲ့မှရတာလား?
ဖြေ : UniCode နှင့် ZawGyi မည့်သည့် Font နှင့်မဆို သတင်းများ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ မြန်မာစာအတွက် စိတ်ပူစရာ မလိုဘဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
မေး : အသုံးပြုပုံလေး သိချင်ပါတယ် ?
ဖြေ : အသုံးပြုပုံအသေးစိတ်ကို ဓါတ်ပုံ ၊ ဗီဒီယို တို့ဖြင့် နေလ ဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှု တွင် ထည့်သွင်း ဖော်ပြ ပေးထားမှာ ဖြစ်ပြီး နေလ Facebook Page (https://www.facebook.com/NayLaApp/)မှာလဲ အပါတ်စဉ် ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ပြင် နေလ၏ Customer Service ဖုန်းနံပါတ် (၀၉၈၉၉၈၄၀၀၀၇ , ၀၉၄၂၀၈၀၅၆၆၇ , ၁၀၆) သို့လည်း ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး ဆက်သွယ် မေးမြန်း နိုင်ပါတယ်။
မေး : နေလ ဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှု မှာပါသည့် အကြောင်းအရာများကို အခြား Social လူမှုကွန်ယက် တွေမှာ ပြန်လည်ကူး ယူဖော်ပြလို့ရနိုင်မလား ?
ဖြေ : နေလ ဗေဒင်ဝန်ဆောင်မှု မှာပါသည့် အကြောင်းအရာများကို အခြား Social လူမှုကွန်ယက် တွေမှာ ပြန်လည်ကူး ယူဖော်ပြလို့ မရနိုင်ပါဘူး။